सरकार हाक्ने सक्षम व्यक्ती रोज्ने अधिकार जनतालाई नै दिएको हो : नेता भण्डारी | सुदुरपश्चिम खबर
सरकार हाक्ने सक्षम व्यक्ती रोज्ने अधिकार जनतालाई नै दिएको हो : नेता भण्डारी
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपाका नेता दामोदर भण्डारीले संसद बिगठनको अर्थ सक्षम व्यक्ती रोज्ने अधिकार जनतालाई नै दिएको बताउनु भएको छ । सरकारलाई पार्टि भित्रैबाट काम गर्न नदिएको र प्रधानमन्त्री बन्न अनेक जाल झेलहरु गरिन थालिएपछि ओली सरकारले संसद बिगठन गरी जनतालाई नै सक्षम ब्याक्ती रोज्ने अधिकार दिएको बताउनु भएको हो ।
संसद बिगठन पछि नेकपा भित्र गुटगुटको भेला छ अनि पक्षबिपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ ! संसद बिगठनले देशलाई कुन दिशातर्फ डोर्याउदै छ ?
देश अध्यावधिक निर्वाचन तर्फ जादै छ । निर्वाचनबाट ताजा जनादेशको सरकार बनाउने गरी अघि बढेका छौ । अरु केहि हुदैन ।
पाँच वर्षको लागि पाएको जनादेशको कदर किन भएन ? दुई तिहाईको अब्बल नेकपा सरकारले फेरी जनतालाई किन दुःख दिएको ?
जनतालाई धोका र दुःख दिएको होइन । जनतामै जाने भनिसकेपछि दुःख दिएको भन्न मिल्दैन । जनतालाई नै पुनः सक्षम ब्याक्ती रोज्ने जिम्मा दिएको हो । जब सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरियो, काम गर्न दिइएन, प्रधामन्त्रीका बिरुद्ध अबिश्वासका प्रस्तावहरु भए । त्यती बेला संसदको ठुलो पार्टी नेकपाले ताजा जनादेशबाट नया सरकार निर्माण गर्नेगरी अघि बढेको हो । जनताबाट भाग्न खोजेको होइन । जनतासमक्ष नै गएर ताजा जनादेशबाट सक्षम ब्याक्ती चुनिने छ । चाहे गगन थापालाई प्रधानमन्त्री भन्ने चाहान छ, चाहे बाबुरामलाई, चाहे माधव नेपाल चाहे प्रचन्डलाई प्रधामन्त्री बन्ने चाहान छ भने जनताको बिचमा जाने जनादेस लिएर आउने यति हो कुरा । जनताको मतको कदर नभएपछि फेरी जनताकै बिचमा आइरहेका हौ ।
पार्टी भित्रै किन बहस छलफल हुन सकेन ? पार्टीमा समस्या आएपछि संबिधान भन्दा माथी गएर बिगठनको बाटोतिर डोर्याइयो भन्ने पनि छ नि ।
पार्टी भित्र छलफल बहस हुन नखोजेको होइन । यो कुरा तपाइलाई पनि था छ कृष्ण जि । प्रचन्डले ओली बिरुद्ध जुन अरोप पत्र ल्याए त्यहि बाटै बिवाद सुरु भएको छ । सहमतीकासाथ अघि जान पटक पटक खोजिएकै हो । सरकारलाई घेरा बन्दी गरियो । देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजियो । एकता र सरकारका बिरुद्ध आउन थालेपछि, जनादेश बिरुद्ध जान थालेपछि यो कदम चालिएको हो । गलत मान्छेको हातमा देश दिनु भन्दा जनमतमा जानु उयपयुक्त ठानेर यो कदम चालिएको हो ।
जनतालाई डर छ कतै देश संकटकाल तर्फ त जाने हैन भन्ने ! के भन्नुहुन्छ तपाई यस्मा ?
छैन ! जनतालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु । देश कुनै दुर्घटना तिर जादैन । तपाइको माझमा आउदैछ सफल नेत्त्रीत्व चयनको लागि । कुनै दुःख हुदैन जनतालाई । राजनितिमा जुनखालको परिस्थीती सिर्जना भएको छ । यस काराणको खोजी गरी फेरी जनताले देशका लागि, विकासका लागि जुन पार्टी सक्षम छ त्यसैलाई जिताउछ । त्यसै ब्याक्तीलाई जनताले रोज्छ ।radio7star बाट सभार